नेपाली काँग्रेस किन चुप छ त? | Er. Surendra Shrestha
Home Blog नेपाली काँग्रेस किन चुप छ त?
सबैले कत्तिको चुनाव लागेको छ भनेर सोध्न थालिसके, तर नेताहरु अझै मन्द गतिमा वरिपरि हेर्दै आफूलाई नियाल्दै मुस्कुराइ रहेछन। हामी जनताहरु जहिले नेताको पछि लाग्छाै – चुनावको बेला भोट माग्न, अनि अरु बेला फलानोले यो गर्दिएन त्यो गर्दिएन भनेर गाली गर्न। तर आखीर पछि लाग्न छोड्दैनाै। अब आउने यो चुनावमा कि उल्टो गर्ने हो? हामी अघि अघि, नेता पछि पछि। यो परिकल्पना यथार्थ हुन सक्छ यदि हामीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो भने।
हिजोका दिनमा केपी शर्मा ओली बोल्नै छोडे। के रहेछ कारण यसो नियालेर हेर्दा पो थाहा पाइयो – नेकपा एमाले सरकारमा थियो, बोल्नै भएन।
आज सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस पनि हो, तै चुप मै चुप। नेकपा माओबादीले धेरै स्वाद लिन पाएको छैन सत्ताको। प्रचण्डको कडा मिजासले एक पल्ट प्रधानमन्त्रीवाट हात धुन परेको तीतो अनुभव कहाँ सजिलै भुल्न सकिन्छ र।
सर्सर्ती हेर्दा सबै नेताहरु, पार्टीहरु निहित स्वार्थको पछि दाैडेको प्रष्ट देखिन्छ। सवैलाइ सत्ता नै चाहिएको छ, पावर आफ्नो मुठ्ठीमा कस्नै परेको छ। हुन त कमाण्डर हुन र सबैलाइ पछि लगाएर हिड्न कसलाइ पो मन हुदैन र। त्यहि भएर यो चुनावमा हामी Neutral पो बस्दिने हो कि?
Neutral बस्नुका फाइदाहरु:
१) तपाइलाइ ठूलै अफर आउन सक्छ बिभिन्न पार्टी र नेताहरु बाट।
२) कुनै नेताको पछि लाग्नु परेन।
३) जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउदै सडक सडक हिड्न परेन।
४) यो फलानो पार्टीको त्यो फलानो पार्टीको भन्नेर कसैले गिद्दे द्रूिष्टी लाउने भएन।
५) सबै भन्दा ठूलो कुरा आफू नेताको पछि पछि हैन, बरु नेता आफ्नो पछि पछि लगाउन पाइन्छ।
तर हैन, आफू कुनै सिद्दान्तमा अडीग हुनुको मज्जा सायद सबैले नबुझेको नि हुन सक्छ। पार्टीको छनाेट साचै एउटा गहन जिम्मेवारीको काम हो।
देशमा बिद्दमान राजनीतिक कुण्ठाहरुलाइ माैलाउन दिएको हाम्रो आफ्नै सस्कारले पनि हो। नेताहरु भ्रष्ट भए, देशमा बिकास भएन, सबैलाइ गुनासो छ, तर यो गराै, यसरी गराै भनेर निश्चित रोडम्याप सहित अगाडी बढ्ने साहस हामी साहसी वीर गोर्खालीमा खासै देेखिदैन।
एउटा सामान्य सन्दर्भमा: सरकारी जागिर भन्ने बित्तिकै चाहे सर्ब साधारण होस्, चाहे प्राइभेटमा १ लाख भन्दा बढि महिनाको तलब खाने जागिरे होस्- दिनरात नभनि टुपी कसेर पढ्छ, साम दाम दण्ड भेद सबै कुरा अपनाएर सरकारी जागिरको लागि जिउ-ज्यान दिएर जागिर खान्छ। अनि जागिर खाएको १-२ महिनामै तिनैका गुनासा सुन्दा जो कोहिलाइ हासो उठ्छ।
तलब नै पुग्दैन,
अति थोरै के,
घर भाडा तिर्न त पुु्दैन,
ब्यबहार कसरी धान्नु।।।।
त्यही भएर अलिअलि यताउति त गर्नै पर्यो।
जागिर खाएको अर्को बर्ष, काठमाडाैको महँगाइ कति सार्हो हो, अब अलिअलि त यताउति गर्नै पर्यो!!!!
अचम्मको कुरा, त्यत्रो टुपी कसेर पढ्ने बेला थाहा थिएन त्यसलाइ सरकारी कर्मचारीको तलब कति हुन्छ भनेर।
हामीलाइ सबै थाहा छ, तै पनि हामी अगाडि बढ्छाै। हामीलाइ थाहा छ प्रष्टसँग तलब कम छ सरकारी जागिरमा, तर त्यहि जागिर चाहिन्छ आखीरमा। नेताहरु गलत गर्दैछन, पार्टीहरुले सोचेको जस्तो काम गरेको छैन, तर हामी तिनैका झण्डा बोकेर दाैडिन्छाै।
यही सोचले हामी अघि अघि नेता पछि पछि कसरी लाग्छन????
सबैभन्दा बलवान समय अनि सोच हो। जबसम्म समय सुहाउदो सोचको बिकास गर्न सक्दैनाै तब सम्म हामी सधै नेताको पछि पछि हिड्नै पर्छ।
हाम्रो देश आफै सम्रुद्धशाली राष्ट्र हो, तर गलत सोचको नेता अनि तिनै नेताको पछि लाग्ने गलत बिचारलाइ प्रोत्साहन दिने हामी जनताको कारण बिश्वले हेर्दा गरिव तथा अबिकसित छाै।
सन्दर्भ स्थानीय चुनावको: नेकपा एमालेको टोली जुटेको छ – केपी ओलीको उखान फुरेको छ किनकी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, मुखमा आएको बोल्न पाएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको एउटा भनाई साभार गर्न चाहान्छु।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आउने तीन तहकै चुनाव एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कप्तानीमा जित्ने र पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा प्रेस चौतारीले पत्रकाहरुसँग भएको छलफलमा भट्टराईले भने, ‘केपी ओली हामी सबैको क्याप्टेन हो, तीनओटै चुनाव उहाँकै क्याप्टेनसिपमा जित्ने हो । एमाले एकसेएक खेलाडीहरु भएको पार्टी हो, जसमध्ये उत्कृष्ट भएकै कारण ओली क्याप्टेन बन्नुभएको हो ।’
अर्कोतिर माओहरु जुरमुराइरहेको देखिन्छ। राप्रपाको कमल थापा देखि बिबेकशील, साझा पार्टी सबै जुटिसके तर जनताले केही खोजिरहेको छ, खै त काँग्रेसीहरु ?????
सबै पार्टीले आफ्ना आफ्ना धारणाहरु बिभिन्न सामाजिक सँजालहरुबाट राख्ने काम धमाधम गर्न थालिसके। तर नेपाली काँग्रेसको अझै आफ्नो प्रष्ट बिचार पार्टीको केन्द्रीय तहबाट नआएको महशुस भइरहेको छ।
पर्ख र हेरको स्थिति छ र अझै पनि पार्टी सभापति ज्यु ?
करिव २० बर्षपछि स्थानीय चुनाव हुन लागेको छ, यही हो माैका जनतालाई स्थानीय तह मै पुगेर नेपाली काग्रेस के हो भनेर बुझाउने अनि देखाउने।
अबश्य पनि हामी बुढो भयाै तर अनुभव र देशको जिम्मेवारीले, हामी बुढो भयाै सारा नेपालीको पीर मर्का देखेर, बुझेर। तर हामी कहिले थाकेनाै, अलिकति पनि पछि हटेनाै किनकी हामी अनुभबले खारिएका अनि एक भन्दा एक जोश जाँगर र बलियो युवाहरुको साथ र सहयोगले पुराना अनि नया पुस्तालाइ समेट्दै निरन्तर देशको उन्नति र प्रगतिको लागि सदैव अग्रसर छाै।
जय नेपाल ।।
Nepali Politics, Politics, नेपाली काग्रेस, स्थानीय चुनाव